Shiinaha Mashiinka baakadaha dib u cusboonaysiinta MSW650 Soo-saar iyo Warshad | Yuanhengtong
Baaxadda codsiga Inta badan lagu dabakhi karo rootiga, rootiga, bur saliida barafoobay, bur saliid, kubbado, winton, keega bocorka, keega Thai, iyo taxane kale oo baakado baakidh ah, baakada filimka balaaran ayaa ugu weyn Is 650 mm. Astaamaha waxqabadka 1. Mashiinka oo dhan waxaa gacanta ku haya xakamaynta barnaamijka PLC oo leh waxqabad xasiloon oo lagu kalsoonaan karo; 2. Qaybaha muhiimka ah ee mashiinku waxay ka sameysan yihiin bir bir ah, iyagoo buuxinaya shuruudaha caafimaadka ee cuntada QS (liisanka wax soo saarka) GMP (baakadaha daroogada); 3. M ...
Ugu badnaan lagu dabaqi karo rootiga, rootiga, bur saliid barafoobay, qashin qubka, kubadaha, wanka, keega bocorka, keegga Thai, iyo taxane kale oo baakado baakidh ah, baakada balaadhka filimka ayaa ugu weyn
Waa 650 mm.
1. Mashiinka oo dhan waxaa xakameynaya xakamaynta barnaamijka PLC oo leh waxqabad xasilloon oo lagu kalsoonaan karo;
2. Qaybaha muhiimka ah ee mashiinku waxay ka sameysan yihiin bir bir ah, iyagoo buuxinaya shuruudaha caafimaadka ee cuntada QS (liisanka wax soo saarka) GMP (baakadaha daroogada);
3. Mashiinka waxaa wata kuleyl saddex geesle ah, oo leh saxnaan sare, xasilooni sare iyo howlkar wanaagsan;
4. Shaashad taabasho midab ballaaran, soocelinta xusuusta xogta otomaatigga ah, dejinta halbeegga, ficillada maxalliga ah, joogso iyada oo aan wax laga helin:
5. Beddel oo hagaaji booska quudinta ee habka quudinta (kan hore iyo kan dambe mm) shaashadda taabashada;
6. Cabbirka dhererka bacda otomaatiga ah waxaa lagu ogaan karaa hal fure oo shaashadda taabashada ah:
7. Xogta wax soo saarka ee 60 ~ 90 nooc oo alaab ah ayaa la diiwaan gelin karaa ugu badnaan, iyo qaabka soo saarista oo noocyo badan leh iyo tiro yar ayaa sidoo kale si buuxda loo waafajin karaa;
8. Ogaanshaha sawir-qaadaha iyo raad-raaca laba-dhinac ah, si wax ku ool ah looga takhaluso khaladaadka baakadka (± 1mm) iyo ka fogaanshaha qashinka maaddada;
9. PID xakamaynta xakamaynta qoyaanka otomaatiga, xakamaynta heerkulka sare sax (± 1 ℃);
10. Kuleylinta gaarka ah iyo kuleylka laba jibaaran ee shaabad toosan waxay kuxiran karaan filimka heerkulka hooseeya, waxay hagaajinayaan nolosha adeegga, waxay yareyn karaan gubashada filimka inta lagu guda jiro xirnaanshaha, aadna wey u yareysaa
Qaddarka duugga ah.
Ballaca Filimka 650mm
Dhererka boorsada 100-400mm
Ballaaran Bacaha <280mm
Soo saar Ctheight <140mm
Ballaca Wareegga Fim ≤320mm
Heerka Baakadaha 20-80bag / min
Awood \_ 380V, 50 / 60Hz,
Baakadaha OPP / PE, PT / PE, PAPER / PE, BOPP / PE
Baaxadda Mashiinka 4800 × (W) 1230X (H) 1600
Miisaanka guud 1350KG
Hore: Mashiinka Baakadaha Mashiinka Mashiinka Si Buuxda U Shaqeeya
Xiga: Mashiinka barkinta barkin soo noqnoqoshada soo noqnoqda
Mashiinka Baakadaha Mashiinka Mashiinka Si Buuxda U Shaqeeya